Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo magacaabay guddi qaran ee dib-u-heshiisiinta iyo wadahadalada Somaliland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo magacaabay guddi qaran ee dib-u-heshiisiinta iyo wadahadalada Somaliland
July 17, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. [Xigashada Sawirka: Villa Somalia]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gelinka dambe ee Arbacada magacaabay guddi qaran ee dib-u-heshiisiinta iyo wadahadalada Somaliland, sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada Villa Soomaaliya.
Farmaajo ayaa u magacaabay xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil guddoomiyaha guddigan, halka mudane Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen “Guulwade” uu u magacaabay guddoomiye ku xigeenka, xubanaha kale ee guddiga ayaa ah:
1.Dr. Cabdiraxmaan Macallin Cabdullaahi (Baadiyow)
2. Dr.Cali Siciid Fiqi
3. Sarreeye Guuto Axmed Jaamac Muuse
4. Xildhibaan Cali Axmed Jaamac (Jaangeli)
“Guddigan ayaa Madaxweynuhu waxa uu u magacaabay in xal waara oo miro dhal ah laga gaaro tabashooyinka walaalaheenna Soomaaliland, loona xaqiijiyo mabaadi’da Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ku dhisan talo wadaagga, wadaniyadda, cadaaladda, wadajirka iyo isku duubnida.” Sidaa ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka.
Sidoo kale, xeerka uu soo saaray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qeexaya xilka iyo waajibaadka guddigaan kuwaas oo ah:
Somaliland oo ah maamul kuyaala waqooyiga Soomaaliya ayaa sheegtay in ay ka go’day inta kale ee Soomaaliya sanadkii 1991, balse wax aqoonsi ah kama helin caalamka.
Wadahadalo hore oo dhexmaray dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland sanadihii lasoo dhaafay ayaa ku dhamaaday guuldaro.
Hargeisa-(Puntland Mirror) Riots have erupted in major towns of Somaliland including Burco, Hargeisa and Ceerigaabo after opposition party accused National Electoral Commission of favouring Kulmiye, the ruling party, sources said. There were clashes between the protesters [...]
Islaan Ciise oo soo dhaweeyay mashaariicda horumarineed ee gudaha gobolada Puntland ka socda
Garoowe-(Puntland Mirror) Islaan Ciise Islaan Maxamed oo ah isin dhaqameed aad loo ixtiraamo ayaa soo dhaweeyay mashaariicda horumarineed ee gudaha gobolada Puntland ka socda. Isaga oo ka hadlayay munaasabada daahfurka dhismaha wadada u dhaxeysa Garoowe iyo [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta oo Axad ah ansixiyay miisaaniyada dowladda federaalka Soomaaliya ee sanadka 2017-ka. Kulan ay ku yeesheen Muqdisho, baarlamaanka ayaa ka dooday miisaaniyada sanadka oo nuqulo kamid ah ay soo gudbisay [...]